Dhismaha dabaqa labaad ee ugu dheer caalamka oo laga hirgeliyay Malaysiya | Arrimaha Bulshada
Home News Dhismaha dabaqa labaad ee ugu dheer caalamka oo laga hirgeliyay Malaysiya
Dhismaha dabaqa labaad ee ugu dheer caalamka oo laga hirgeliyay Malaysiya
Bulsha:- Dhismaha dabaqa labaad ee ugu dheer caalamka oo ka kooban 118 dabaq ayaa laga hirgeliyay caasimadda Malaysia ee Kuala Lumpur.
Waxaa lagu wadaa in la dhameeystiro Merdeka dhismihiisa sanadka soo socda, wuxuuna hadda ka sareeysa China Tower ee Shanghai Tower, waxaana ka dheer oo kaliya Burj Khalifa ee Dubai.
Ra’iisul wasaaraha Malaysia, Ismaaciil Sabri Yacquub ayaa ku tilmaamay mashruucan inuu yahay munaaradda mustaqbalka.
“Tani kaliya ma ahan guul weyn oo laga gaaray dhinaca injineernimada,” ayuu u sheegay suxufiyiinta. Laakiin sidoo kale waxay sii xoojinaysaa mawqifka Malaysia oo ah waddan casri ah oo horumaray.
Dhismahan ayaa laga hirgeliyey qayb taariikhi ah oo ku taal Kuala Lumpur, dabaqa dhaadheer ayaa waxa uu ku dhow yahay garoonka Stadium Merdeka, halkaas oo hogaamiyihii hore Tunku Abdul Rahman uu ku dhawaaqay madax banaanida Malaysia 1957.
Ismail Sabri, oo loo magacaabay ra’iisul wasaare bishii Ogosto, ayaa sheegay Talaadadii in naqshada farshaxanku “ay muujinayso sawirka. ” ee Rahman oo kor u taagaya gacantiisa si uu ugu qayliyo “merdeka!” oo la macna ah “madax banaan!”) in ka badan lixdan sano ka hor.
In kasta oo dhismaha la filayay in la furo sanadkan, shaqada ayaa si ku meel gaar ah loo joojiyay bishii Maarso 2020 markii dowladda Malaysia ay soo saartay tallaabooyin adag oo lagula dagaallamayo fiditaanka Covid-19.